अभिनेत्री काजोलले वर्षौदेखि किन लुकाइन् यती ठुलो राज ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
अभिनेत्री काजोलले वर्षौदेखि किन लुकाइन् यती ठुलो राज ?
काजोल भारतीय चलचित्रको एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुन्। काजोलको नाम उद्योगको सबैभन्दा राम्रो अभिनेत्रीहरू मध्येमा छ । उनको खातामा धेरै सुपरहिट चलचित्रहरू छन्। काजलको मात्र होइन उनीहरूको सम्पूर्ण परीवारको बलिउडसँग सम्बन्धित छन् ।
काजोलकी आमा तनुजा उनको समयको एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थिइन्। यसबाहेक, उनकी अन्टी नूतनको नाम पनि बलिउडको राम्रा अभिनेत्री मध्ये एक थियो। तर उहाँ अहिले यस संसारबाट केही समय अघि नै बिदा हुनुभएको छ । धेरै थोरै व्यक्तिहरूलाई मात्र थाहा छ होला कि अभिनेता मोहनीश बहल नूतनको छोरा हुन्। काजोलको पति अजय देवगन पनि एक प्रसिद्ध अभिनेता हुन् र उनको कजन रानी मुखर्जी पनि फिल्म उद्योगकी रानी हुन्। यी सम्बन्धले नै सङ्केत गर्दछ कि काजलको सम्पूर्ण परीवार फिल्मी हुन्। तर आज कजलको बारेमा यस्तो छक्क पर्ने कुरा बाहिरीएको छ जसले उद्योगको साथै सम्पूर्ण संसारलाई छक्क पारेको छ।
यो कुरा धेरै वर्षदेखि काजलले लुकाइरहेकी थिइन्। तर आज यो कुराको खुलासा भएको छ। वास्तवमा, काजोललाई ‘स्वच्छ बानी स्वच्छ भारत’ को एडभोकेसी राजदूतको रूपमा चयन गरीएको छ। यति इज्जतदार भए तापनि, काजोलको परिवारले साधारण जीवन बिताउने विश्वास गर्छ। काजोल एक “सादा जीवन उच्च विचार” भनाईलाई आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्ने अभिनेत्री हुन् । उनका लागि कुनै काम सानो वा ठूलो छैन। उनी परिवारका सम्पूर्ण कामहरु राम्रोसँग गर्छिन ।
उनी एक असल आमाको साथै एक असल गृहिणी पनि हुन् । सानो उमेरदेखि नै काजोल घरको कामहरु गर्न मन पराउन्थिन् । जब उनी सानी थिइन्, घरमा काम गर्ने कामदार नआएको बेला उनी आफैं घरको सरसफाई गर्थिन । उनले आफ्नो यस्तो गुण बच्चाहरुलाई पनि सिकाउदै आइरहेकी छिन । शाहरुख खानसंग काजोलको जोडा अत्यन्तै हित मानिन्छ । उनीहरुको दुवैको बीचमा राम्रो मित्रता पनि रहेको छ ।
उनकी सुपरहिट चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ अझै पनि सिनेमाघरमा प्रदर्शनमा आइरहेको छ । ५ अगस्ट १९७४ मा , काजोल महाराष्ट्रमा जन्मिएकी थिईन । ४३ वर्षीय काजोलको एउटा बहिनी छे , उनको नाम तनिषा मुखर्जी हो । फिल्म ‘बेखुदी’ बाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी अभिनेत्री काजोलले ‘बाजीगर’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी गम’ र ‘फ़ना’ जस्ता धेरै सुपरहिट फिल्महरु दिएकी छिन । काजोलले अहिलेसम्म ६ वटा फिल्मफेयर अवार्ड जितिसकेकी छिन ।